मनोरञ्जन केन्द्र "फिरऊनले" आर्मेनिया मा: विवरण, समीक्षा
प्रत्येक देश आफ्नै तरिकामा आगंतुकों लागि आकर्षक छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक तिनीहरूले र जान आवश्यक सक्नुहुन्छ जहाँ देखेर लायक छन् कि ठाँउहरु, साथै ठाउँहरूको सूची छ। यस सन्दर्भमा पुरातन सानो आर्मेनिया कुनै अपवाद छ। बस ठूलो यो सानो देशमा आकर्षण र सांस्कृतिक स्मारक संख्या। तर यो देश पर्यटन बिक्री भ्रमण संचालक सिफारिस गरिएको छ कि सबै छैन।
आर्मेनिया को गणतन्त्र मा पकडे, हरेक पर्यटक सबैका लागि सोख भेट्टाउनुहुन्छ। केही यसको धेरै मन्दिर र चर्च, अरूलाई निरीक्षण गर्न रुचि - जस्तै पहाडी रूपमा बस आराम, लेक Sevan, र अरूलाई - मनोरञ्जन प्रतिष्ठानबाट मा आराम।
तिनीहरूलाई को एक अवकाश र मनोरञ्जन "फिरऊनले" को एक नव निर्मित जटिल छ।
तीन लाख भन्दा बढी मान्छे ठूलो परिसर को एक बिट को जनसंख्या एक देशमा। сразу же стал популярным. जाहिर छ, यो मनोरञ्जन केन्द्र "फिरऊनले" आर्मेनिया मा तुरुन्तै लोकप्रिय भयो भन्ने तथ्यलाई बताउँछन्। यो अचम्मको छैन। अवकाश र मनोरञ्जनको यो जटिल को मात्रा अचम्मको छ। यसलाई चार शानदार कोठा, होटल जटिल र एक क्यासिनो संग रेस्टुरा समावेश छ।
आर्मेनिया, यस्तै स्कोप संग एक सानो गेमिङ प्रतिष्ठानबाट मा। क्यासिनो "Shangri ला" धेरै रोचक वास्तु डिजाइन छ। यो दुई ogromnyz पिरामिड प्रतिनिधित्व गर्दछ। सामान्यतया, एक मनोरञ्जन जटिल "फिरऊनले", शहर Abovyan राजमार्ग बाहिर निर्माण, तुरुन्तै आफ्नो originality संग आँखा परिहाल्छ। शानदार र स्वादिष्ट - त्यसैले यसलाई चिनारी, पहिले नै व्यवस्थित भएकाहरूलाई यहाँ भ्रमण गर्न। मनोरञ्जन केन्द्र आर्मेनिया मा "फिरऊनले" साँच्चै एक प्रकारको छ। यो विशेष विशेष "Ramses" र मा, भोज हल मा सजिलै देखिने छ "क्लियोपेट्रा।"
समीक्षा द्वारा न्याय, एक जटिल "फिरऊनले" मा ठाँउ लिन्छ कि हरेक घटना, यो विवाह, व्यवसाय बैठक वा भोज हुन, अविस्मरणीय बन्नेछ। तीन सिद्धान्तमा आधारित यो संस्था को प्रशासन द्वारा अपनाए नीति,: यहाँ मात्र व्यवसायि, खाना राम्रो हुन, र कर्मचारी को काम गर्नुपर्छ - faultless।
имеет очень удобное месторасположение. मनोरञ्जन केन्द्र "फिरऊनले" आर्मेनिया धेरै सुविधाजनक स्थान छ। यो Balahovit गाउँ बारेमा ताल Sevan गर्न राजधानी प्रमुख राजमार्ग मा निर्माण गरिएको छ। उहाँले एक विशाल, पूर्ण landscaped क्षेत्र, एक बार द्वारा संलग्न छ। परिसर को पूर्वाधार ठूलो निःशुल्क आउटडोर पार्किंग समावेश छ।
होटल को केन्द्र मा रहन, अतिथि स्थानीय आकर्षण गर्न सबैभन्दा सुविधाजनक पहुँच अवसर पाउनेछन्। आर्मेनिया मा मनोरञ्जन केन्द्र "फिरऊनले" द्वारा प्रस्तावित सेवाहरू, को दायरा पनि सबैभन्दा मांग आगन्तुक पूरा गर्नेछ। यो पूर्वाधार एक सना र ज्याज बार, साथै धेरै स्मारिका पसलहरूमा पनि समावेश छ। आमाबाबु र मनोरञ्जन केन्द्र "फिरऊनले" आर्मेनिया मा संग उपस्थित जो बच्चाहरु खेल मैदान मा रमाइलो वा छोराछोरीको क्लब भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
येरेवन मा Zvartnots अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा गर्न जटिल देखि दूरी - बीस-चार किलोमिटर।
को आगंतुकों, परिसर को क्षेत्र मा मार, होटल यसको ढोका "बहु ग्रैंड" गर्न खोल्छ। भित्र Stepping, व्यक्ति लक्जरी को दुनिया मा छ। त्यहाँ सधैं उच्च गुणवत्ता सेवा र प्रत्येक ग्राहकको गर्न व्यावसायिक दृष्टिकोण संग संयुक्त आर्मेनियाली आतिथ्य को भावना छ। होटल जटिल कोठा को असी दुई फरक विभाग, साथै छ लक्जरी विला को रूपमा, एकल प्याकेजमा staffed हुन्छन्।
बहु ग्रैंड Pharaon मुक्त वायरलेस इन्टरनेट पहुँच, सुरक्षित पार्किंग, एक ठूलो इन्डोर पूल प्रदान गर्दछ। रुचि, सना को र फिटनेस सेन्टर र स्पा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ जैकुजी मा भिजेको ती, राम्रो तरिकाले-सुसज्जित जिम Indulge।
कोठा वातानुकूलन र एक फ्रिज, विद्युत केतली, सपाट-स्क्रीन टीवी, प्रत्यक्ष डायल टेलीफोन हो। यो स्नान र चप्पल संग उत्कृष्ट र जीर्णोद्धार बाथरूम प्रदान गर्दछ, त्यहाँ बाल dryers र मानार्थ टयलेटरीज छन्। आफ्नो कोठा अनुरोध भोजन वितरण सेवा उपलब्ध छ। होटल अतिथि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र एक बारबेक्यू।
आर्मेनिया मा "फिरऊनले" पहिलो दिन देखि अविश्वसनीय लोकप्रिय भएको छ। र यो आफ्नो रेस्टुरेन्टको कोठा, विशेष को "Colosseum", एक समयमा एक हजार मान्छे भन्दा बढी बनाउन सक्षम छन् कि छैन। कि यहाँ ठूलो घटना थियो, वा मानिसहरू सानो कम्पनीहरु मा आउन को बिना प्रत्येक यात्रा एक अविस्मरणीय घटना बन्नेछ।
रेस्टुरेन्ट "फिरऊनले", को eponymous मल चलिरहेको चार हल। यो तिनीहरूलाई पहिलो - "Ramses" - अप हजारौं गर्न को क्षमता छ। यसको क्षेत्र एक हजार दुई सय वर्ग मीटर छ। यो हल यसको प्राविधिक उपकरण अनुसार काकेशस मा अनुपम छ।
यो ठूलो मात्रा घटनाहरू लागि डिजाइन गरिएको छ। दृश्य यो चौध संगीतकार समायोजित गर्न सक्छन्। यो कोठा को कुनै पनि देख्न किनभने आधा मीटर मा खडा। आफ्नो साँच्चै शाही लक्जरी को पृष्ठभूमिमा "Rameses" को सुविधाहरू एक अद्वितीय झूमर क्रिस्टल बनेको छ। यसलाई साथ दुई र बीस हजार दीपक जला रूपमा यो luminaire को "रेकर्ड को गिनीज बुक" मा दर्ता गरिएको छ। को झूमर तीस-तीन टन को कुल वजन।
अर्को कोठा - "क्लियोपेट्रा" - तीन सय र पचास मान्छे पकड गर्न सक्छन्। मिश्र को रंग - यसको भित्री मा सुन, बेज र ocher रंग को धेरै छ।
रेस्टुरेन्ट र मनोरञ्जन जटिल "फिरऊनले" को सबै भन्दा ठूलो हल "Coliseum" छ। त्यहाँ एक हजार मान्छे आमन्त्रित गरिन्छ जो विवाह र उत्सव छन्। यो फोहराहरू र हरियो रिक्त स्थानको साथ एक ढाकिएको छत छ। यो कोठा को दृश्य दुई मीटर को एक उचाइ मा स्थित छ।
खेल केन्द्र "Shangri ला", जहाँ मुख्य रूप विदेशीहरू रोचक सिद्धान्त कार्य गर्न आउँछन्। बीस-पाँच हजार डलर एक यात्रा शुल्क: यहाँ हरेक आगन्तुक लागि नियम फेला परेन। विजेता वा क्यासिनो ग्राहक गुमाउने बिना यो पहिले नै भुक्तानी यो रकम छ। मूल्य पनि एक डिलक्स कोठा, खाना र केही मनोरञ्जन मा आर्मेनिया गर्न उडान भ्रमणमा र फिर्ता, आवास समावेश छ।
मनोरञ्जन जटिल भ्रमण गर्ने "फिरऊनले" धेरै विदेशीहरू, सन्तुष्ट थिए। तिनीहरूले कसरी स्थान र सेवा को गुणस्तर मनपराएका। केही विशेष एक क्यासिनो मा खेल्न आर्मेनिया आए।
रेस्टुरेन्ट लागि जाँदा, आगंतुकों को विशाल बहुमत यो उच्चतम स्कोर मूल्याङ्कन गर्नुभयो। र भोजन, र सेवा - सबै उच्चतम स्तर मा प्रदान। एउटै होटल जटिल को भने गर्न सकिन्छ।
Emerald लेक कजान मा - विश्राम लागि प्रशस्त अवसर। यो मनोरञ्जन केन्द्र "Emerald लेक" Toksovo मा
आकर्षण याल्टा: वर्तमान मध्य युग देखि
वसन्त savages मा आराम। Yarovoye - पालमा बाँकी। ताल Yarovoye - बाँकी
Gelendzhik। Gelendzhik मा बच्चाहरु - जहाँ रहन?
पाहुना पेन्सन "Aquamarine": विवरण, फोटो, सेवा, पर्यटकहरु को समीक्षा
आधुनिक डिजाइनमा फोटो
"द Executioner": एक सारांश। "द Executioner" - कथा Kuprin
अलेक्जेंडर रेपपोर्ट - रूसी अमेरिकी
एड्स सुनवाई मूल्य
फैशनेबल लामो स्कर्ट। के गर्छिन्?